Afar kamida Kooxdii dilalka iyo qaraxyada ka geysan jirtay Boosaaso oo dil toogasho lagu xukumay. - Jowhar somali news leader
June 21 (Jowhar.com)-Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in Maxkamada darajada 1aad ee Ciidamada qalabka Sida ee shanta Gobol iyo dambiyada culus ee Puntland ay xukun dil ah ku riday Afar kamid ah Shabaab oo howlgal lagu soo qabtay.
Raggan oo ah Shabakad isku xiran kuwaasoo dilalka iyo qaraxyada ka geysan jirey magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa maalmihii la soo dhaafay maxkamdeyntooda socotay, iyadoo maanta uu go’aanka xukunka dilka ah uu ku dhawaaqay Dhame Cali Ibraahim Cismaan.
Raggan oo lagu kala magacaabo Jaamac Aadan tusbaxle, Ayuub Cumar shire, Cabdullaahi Salaad Boos iyo Maxamuud Abshir Muuse ayaa maxkamada kahor qirtay eedaha iyo danbiyada loo heysto, iyagoo ka sheekeeyay xiliga ay Shabaab galeen iyo inta howlgal ee naf goyn ah oo ay ka qeyb qaateen.
Si kastaba, Puntland ayaa horey sidaan oo kale xukuno dil ah ugu fulisay xubno ka tirsanaa kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, kuwaas oo ka howlgalayey magaalooyinka maamulkaasi.